Afarta xaafadood ee Boosaaso | allsanaag
Afarta xaafadood ee Boosaaso
Beesha Majeerteen sadbursigii Puntland Amni iyo horumar midna uma keenin welina way sii wadaan?
Dhowr iyo labatankii sano ee Puntland dhisnayd waxa ka jiray sadbursi ay inta badan samayn jireen madaxda Puntland mid dhexe iyo mid heer gobol . Sadbursigani magacyo badan ayeey ula baxeen oo lagu xalaalsaday nidaamkan xaaraanta ah sida Caruur ayuu ku korsanayaa Xafiiska IWM.
Sadbursigan madaxdii samaynaysay, haddii ayna horay u ogayn markii ay ku kacayeen dib u dhaca uu keeni doono , maanta waxaan cidna ka qarsoonayn inaanu u keenin Horumur i yo Amni iyo isku dhowaansho beelaha dhexdooda ah . Amni xumada maanta Puntland ka jirta waxa keenay oo sabab u ahaa waa shakhsiyaad markii hore diiday Caddalad daradan iyo sadbursiga madaxda Puntland samaynayeen , laakiinse markii danbe maciin biday inay kaashadaan quwado shisheeye, oo qaarkood yihiin Argagixiso.
Tusaale Gobolka Bari, waxa gudoomiye ka ah Siyaasi ka soo jeeda beesha Cali saleebaan ee Majeerteen isla markaa Degmada Carmo ee hoos tagta gobolka Bari waxa Gudoomiye degmo ka ah nin ka soo jeeda Beesha Cali Saleebaan, Majeerteen . Beesha Dubays ee Warsangeli ayaa degaan ahaan iyo Dad ahaanba uga badan Beesha Cali Saleebaan gobolka Bari. Welina waa lagu cel celinayaa in laysku bede bedelo Gudoomiyaha gobolka Bari iyo kan degmada Carmo ee gobolka Bari inay beesha Cale Saleebaan qaataan. Maaha mid ku salaysan wada lahaansho, degaan, tiro iyo taariikh hore.
Dhowaan madaxweyne Deni wuxuu sheegay in degmada Boosaaso u qaybinayo Afar waaxood. Sida ilo lagu kalsoon yahay noo sheegeen waxa loo wadaa Afartan waaxood kala qabtaan:
1. Cabdi Aboole Cali Saleeban xaafada lagu qoray waa New Bosaso
2- Ina Buhoolde , Cali jibraahil waxa lagu qoray wa Masjod Rashiid area
3 Siyasi ka soo jeeda beesha Deshiishe xaafada Cariga
4- Siyaasi ka soo jeeda beesha Cismaan Maxamuud xaafadda Laanta Hawad.
Ugu danbayntii maamulka Puntland iyaga oo maanta og dagaalka lagula jiro maamulkooda oo la doonayo ina lagu bur buriyo, iyada oo loo adeegsanayo khaladkii ay horay u galeen madaxda Puntland oo ay ka mid tahay Sadbursiga. Inay maanta ku fekeraan sadbursi hor leh oo kii hore ugu keeni waayey Amni iyo horumar, Laakiinse abuuray nacaybka beelaha walalaha dhexdooda , kaas oo maanta maraya meeshii ugu xumayd . Waa ka digaynaa in degaanada alshabaabku haysto ay maamulka Puntland kala weynaato Sadbursi aan amni iyo horumar keeni doonin. Sidoo kale waxaan ka digaynaa in dulqaadka beelaha qaarkood aan loo aragy in lagu tijaabin karo wax kasta.
← Guddiga covid-19 ee deegaanada Puntland Qoodax oo taageeray Jeete →
9 thoughts on “Afarta xaafadood ee Boosaaso”
Sanaag April 22, 2020 at 00:05
Ind allsanaag wax puntland ku tageeri waynaye meant xaqiiqda ka hadashaye imisa ku lahaa war mesha puntland la yiraado wali waa dhaaftaye musuq maasuq iyo cadaadal daro!
Reer-garaad boy April 22, 2020 at 03:53
Waxwalba waa laydinku dayay waana ka dhiidhiyi waydeen
Waxan ka dhashay beel daciif ah oo somalinimo iyo ehelnimo qalbiga uga dhaadhacday halka beelaha kale somaliyeed ay u dagalamayaan xaqooda anigu waxaan daba fadhistaa suldaan
Halka beelaha kali is maamulYaan oo jabhadaynayaan oo xaqooda siyaasiyadeed helayaan anigu waa iga mamnuuc jabhadnimo oo waxaan dhawraa eray somalidu ii taqano oo ah warsangeli nabadu jecelyahay waxan ka hadhnay siyaasadii
Jabhadayntii xaq u dagalankii siyasiyiintayda ku jira dawladaha waa qaar damiirkii ka dhintay oo aan difaaci karin masiirka umadan waxwalba lagu dayay ee ann hadlaynba
Halka beelaha kale ay dhisanayaam dhulkooda deganadooda anigu waxan sugnaa dawlad iyo dal aan waligi lugihiisa ku istaagayn gabogabo waxyalaha dani iyo muse ku kacayaan ee marka cerigabo warsangeli inusan daginba loola dhaqmo marna bosaaso inusan daginba lola dhaqmo waa wax laga dareemay dadka deeganka dagan iyo siyaasiyiintooda aan awoodin inay kalmad afka so marsiyaan
Wax kale halaguna dayo lkn ma yeelayno waxyabaha masiiriga ah sida dhulka sharafta iyo cirdigeena in loo gafo Waliba yadoo lagu jiro 2020
Reer garaad boy April 22, 2020 at 03:58
Bosaaso wayka wayntahay wax afar degmo loo qaybiyo warsanhelina wuuka waynyahay dad degmo beel kale hoos taga adeer
Markii deni dhahay 4 degmon u qaybinaya bosaaso markiba waan iska gartay in warsangeli loo jeedo
Dhulbahnte ayaad hosaasiseen marka waxad rabtaan hada inaad warsame cidlo dirto si uusan mustqbalka magalada maayir uga noqon ama xil uga qaban
Arinkani waa arin masiiri ah odayaashu ha isu yimadeen halaga tashodo arinkaa ayaanu leenahay yaan laga yeelin waxkasta ninkaa
Abdullahi April 22, 2020 at 08:06
Salaam: allsanaag ma lacagti Qadar baa ku soo gaartay ; maxaa keenay isbelkaan saan waad ka rooneyde.
Bosaso waa nabad dadkuna dhib ma qabaan ee waa inoo Ceerigaabo iyo Shidan. Markaas aanu arrimahan uu soo jensano.
Tan labaad reer Garaad boy: Dhulbahante cid hoosasioyey ma jirto ogow ma warayso dadkaaga Malintii LASCAANOD ay la qabsaday Dhulbahante baa DHABRKA KA TOOGTAY walaalahood meelo fog fog uga yimid. Ayago ARICADEY baacsanaya REER BUCURBACEY baa dhulbahante ragii bacasanayey kuwaas aad dhabarka ka toogaten.
Marka arrinta WARSANGELI iyo taada faraq wen baa uu dhaxeeyah. WARSANGALI DHULKIISA WUU HASTA qeybaha ka maqana waa ku tala ira camalkeeda.
PL waxa sabursi ku haya waa DHULBAHANTE dhul iyo dad midna kuma laha PL misna Madaxweye ku xigeen bay ka yihii iyo nitaas oo wasiir.
Nidaamka marka laga guuro oo degmo iyo cod wax lagu qeybsado. soo markaas sadburigii DHULBAHANTE MEESHAS KA BIXIMAAYO.
intaas aan kuu sheegay Allsanaag admin wuu ogyahay.
Wa billahi Towfiq iyo Ramadaan MUBARAK
Abdullahi April 22, 2020 at 12:29
Salaam: allsanaag marki degmo loo qeybiyo magaalda gudoomiya kasta wuxuu yeelanaya gole. Golahasu waxay soo doorayan Gudomiyaha xaafadda. Markaas Kaddib baa godomiyaha xaafadaha iyo golayaasha soo doorandoonan meeyarka. Tanu waa tallabadi kowaad ee tan soo socota aanu sugno. Sababta saas loo sameynayo amaanka dartiis weeye oo waxaa la rabaa in xafadkasta masuuliyad laga sarro wixii dhaca.
Tan labaad reer Garaad dad waxkast inta shisheye ku dayey oo aan ka danqan waa Dhulbahante. Bal fiiri Mayorka iyo Gudomiyaha Gobolka waa REER BUCBACAYR ama isaaq taad uu taqanid. Bal fiiri Xudum iyo Taleex baa la yiri waa dhul lagu muransanyahay oo la wada dego.
Warsengali walaalahood bay is jiid jiidayan ee balo ma jirto.
RAAGE SAÏD April 22, 2020 at 12:45
SANAAG HAYLAAN IYO BARI GALBEED= MAAKHIR STATE OF SOMALIYA
jamac April 22, 2020 at 12:56
Abdullahi ha u gafin wiilka bogga soo qoray. Hadalkaaga intiisa kale dhib uma arko laakiin inaad ku dhahdo ma ma lacagtii qadar baa kusoo gaartey waxee muujineysaa inaad ogolayn in la is dhaliilo ama cabasho la sameeyo ama qofku wixii dulmi uu u arko ka hadlo.
Allsanaag markuu had iyo jeer puntland wanaaggeeda iyo weliba dheeri sheegayo wixii wax u dhimayana ka difaacayo isaga oon cidna wax ku siin, wuxuu ugu dhibtoonayaa oo ugu hawl galayaa waa dadkiisii iyo dalkiisa. Anigu reer sanaag iyo reer bari iyo reer sool midna ma ahi laakiin Harti ayaan ahay.
Garaad boy waax dhihi lahaa xooggiina iyo xanaaqiinna harti hala soo aadinina ee cidda wax idiin dhintay garda. Hart waa meeshii aad usoo baqan lahayd ee ma ahan meeshii aad usoo booteyn layd.
admin Post author April 22, 2020 at 20:03
Jamac waa mahad san tahay.
muse April 22, 2020 at 18:03
Carmo miyuuWarsangeli doonayaa in uu Gudoomiye ka noqdo, Ma Laanta-Hawduu Doonayaa in uu gudoomiye ka noqdo, Ma xaafada Dashiishe iyo Wali Jibraahiil.
Waa maxay qaylo-dhaantu iyo waaraydu????????????????//